ISpain ihola izinkokhelo "zokuxhumana" ngenkathi yenkokhelo yeselula | Izindaba zamagajethi
ISpain ihola izinkokhelo zokuxhumana nabantu ngesikhathi sokukhokha okuhambayo
I-Apple Pay, i-Samsung Pay, i-Bizzum ... manje sesisenkathini yokukhokha okusheshayoAsinaso isikhathi noma isifiso sokulahlekelwa emsebenzini osithinta ngokwezomnotho, akusikho okunye ngaphandle kokukhokha. Noma kunjalo kakhulu eSpain, izwe lapho kuze kube muva nje bekuyisiko eligxilile ukukhombisa (nokucela) i-DNI ukuqinisekisa ukuthi ngubani osebenzisa ikhadi lesikweletu. Le yindlela amabhange amaningi aseSpain aqala ngayo ukunikeza uhlelo lweNFC.
Ngale ndlela, ISpain isibe, yize kunesiko lethu lokuzivumelanisa okunzima nentuthuko yezobuchwepheshe, izwe laseYurophu elinesilinganiso esiphakeme kakhulu sezinkokhelo zokuxhumana. Izindaba ezinhle zigcizelela ukuthi sisezweni ngokwesiko elibalekela ubuchwepheshe obusha ezindaweni eziningi.
Ithimba le- Osborne clarke wenze ucwaningo olwembula iqiniso lokuthi ama-57% abantu baseSpain basebenzisa amakhadi angaxhumani nabo, ngakho ukuthunyelwa kwezinhlangano zebhange kube kwenele futhi kusebenza kahle ngasikhathi sinye. Ngalesi sikhathi sithola isibalo esiphakeme kakhulu kunesilinganiso saseYurophu, esingama-45%. Njengoba bekungeke kube ngenye indlela, ukuqinisekisa ukuphumelela kokungaxhunyaniseki kumakhadi esikweletu nasebhange kudingekile impela ukuthi amabhizinisi ajwayele ukufakwa kwama-daphones aguquliwe, esinye isici lapho iSpain ihola khona iYurophu ngokocwaningo lwe-VISA olunquma ukuthi yinie kunama-terminals angathintwa angaba ngu-820.000 kulo lonke elaseSpain, uma nje kufika u-2020 wonke amabhizinisi amukela izinkokhelo zamakhadi afaka phakathi.
Le yindlela i-NFC kumakhadi wazo zonke izinhlobo eyenze kalula ngayo indlela yayo, yize lezi zingcezu zepulasitiki kungenzeka zenzelwe ukuthi zithathelwe indawo yizinkokhelo zeselula futhi ngenxa yokuxhumana okungenathintwa nezinsizakalo ezinjenge I-Apple Pay, okuthe ngendlela ehlukile, yamemezela iCaixa Bank phakathi kwabahlinzeki abasha ngaphambi kokuphela kuka-2017.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » ISpain ihola izinkokhelo zokuxhumana nabantu ngesikhathi sokukhokha okuhambayo
UWolder waseSpain unqotshwa inkinga yenkinga yamaselula